Faysal Cali Waraabe - Wikipedia
Faysal Cali Waraabe, waa aasaasaha iyo gudoomiyaha Xisbiga UCID.
Faysal Cali Waraabe (ku dhashay magaalada Hargaysa 1948) waa Injineer iyo siyaasi reer Somaliland, waana gudoomiyaha xisbiga UCID. Faysal hore wuxu u ahaa agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaarada howlaha guud ee Somalia . Isu duwahaha wasaarada howlaha guud ee gobolada Beey iyo Bakool sidoo kale Faysal wuxu soo noqday madixii injineerada ee caasimadii Somalia ee Muqdisho. Ku darsoo Faysal waa asaasaha ahna gudoomiyaha xisbiga Cadaalada iyo Dareelka UCID
T[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Dhalashada iyo Waxbarashadiisi
wuxu ku dhashay magaalada Hargeisa 1948. Waxbarashadiisii hoose / dhexe wuxu ku qaatay Hargeysa. Dugsiga sare wuxu Faysal ku dhameeystay magaalada Borama.
Wuxu waxbarashadii heer jaamacadeed kusoo qaatay dalkii laysku odhan jirey midowga Soofiyeet isagoo ka heysta shahaada M.sc injineernimo ah jamacada Leningrad.
1997-2001 jaamicadda Helsinki ayuu faysal ku bartay cilmiga xidhiidhka caalamiga ah.
Sanadihii 1976 ilaa 1981 wuxuu noqday agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda hawlaha guud halka 1981 ilaa 1984 wuxuu noqday faysal madaxii engineerada ee dawladda hoose ee muqdisho.
1984 ilaa 1990 wuxuu faysal cali waraabe ahaa gudoomiyaha sharikad dhisme oo magaceedu ahaa Ayaan .
Faysal Cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID ee Somaliland ahna murashaxa madaxweynaha ee xisbigaasi wuxuu 1994 ilaa 1996 uu afhayeen u ahaa koox aqoonyahanno iyo odayaal ahaa oo qurba jog ahaa oo u soo gurmaday xallinta colaadihii la soo dersay xilligaasi Somaliland.
Sanaddii 2000 wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii xisbiga mucaaridka ee UCID ee cadaaladda iyo daryeelka oo gudoomiye loo doortay shirweynihiisii ugu horeeyay ee 2001.
faysal Cali waraabe wuxuu yahay hadda murashaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaridka ee UCID doorashada 13november 2017 isagoo laba jeer oo hore u soo tartamay doorashooyinkii madaxeynaha ee 2003 iyo 2010 oo aanuu ku guuleysan
Faysal wuxu kasoo jeedaa beesha Ciidagale ee Sh. Isaxaaq.
Faysal Cali waraabe wuxuu leeyaha xaas iyo sagaal caruur ah oo siddeed wiilal yihiin .
Faysal wuxuu ku hadlaa afafka Ingriisi, carabi , rush iyo finish .
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Faysal_Cali_Waraabe&oldid=177727"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Agoosto 2018, marka ee eheed 15:27.